स्मार्टफोन तात्ने समस्या छ ? अपनाउनुस् ५ टिप्स - Tamang Online
इजरायलमा नेपाली दुतावासले २५६३ औं बुद्ध जयन्ती मनाउने,नेपाली समुदायको संघसंस्थालाई सहभागी हुन आव्हान प्रधानमन्त्री ओली र इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु बीच टेलिफोन वार्ता श्रीलंका बम विस्फोटमा परी ५० को मृत्यु ,दुई सयभन्दा बढी मानिसहरु घाइते भारतीय दूतावासद्वारा तामाङ वस्तिमा रहेको छ्योइफेल गुम्बाको पुनर्निर्माण ह्योल्मो समाज इजरायलले बार्षिक उत्सव तथा साधारण सभाको साथमा २५६३ औं बुद्ध जयन्ति मनाउने तयारी कुलमान घिसिङको निर्देशन ‘ट्रेड युनियनको चुनावमा गाडी नदिनु’ स्वयम्भू र हनुमानढोका जोड्ने गुरुयोजना सार्वजनिक महिलालाई चरित्रहीन भनेपछि बुद्धले मुखियाको एक हात समातेर बजाउन लगाए ताली विप्लव समूहलाई नेपाल बन्द फिर्ता गर्न तामाङ घेदुङको माग दोलखाको शैलुङमा हजारौं पर्यटक इजरायलको टिकट काटेकी सुनिताको घरमा ‘अवैध प्रेमी’को लास नेपाली युवतीलाई केन्याको डान्स बार पुर्याउने मानव तस्करी पक्राउ अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च इजरायलले नयाँ बर्ष २०७६ भव्यताको साथ मनायो नेपाल, भारत र चीनकी चेलीले एकसाथ सगरमाथा चढ्ने थाङ्का पेन्टिङबाट गाउँमैं रोजगारी
स्मार्टफोन तात्ने समस्या छ ? अपनाउनुस् ५ टिप्स
तपार्इं हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोन कुनैपनि बेला तात्न सक्दछ । प्रयोग गर्दागर्दै स्मार्टफोन तातेको बेला के गर्नुहुन्छ ? फोन चलाउन छाडेर गोजीमा राख्ने, कानबाट हटाउने, गोजीबाट निकाल्ने आदि आदि ।
कहिलेकाहीँ नचलाउँदा नचलाउँदै पनि फोन तात्ने समस्या आउन सक्दछ ।
आखिर फोन अनायासै तात्नुको कारण के हो ? वास्तवमा यसका विभिन्न कारण हुनसक्दछन् ।
एउटा कारण हार्डवेयरको समस्या । हार्डवेयर, जसलाई स्मार्टफोनको मस्तिष्क पनि भनिन्छ ।
फोनभित्रको हार्डवेयरको समस्याले मात्र होइन कहिलेकाहीँ विभिन्न बाहिरी कारणले पनि स्मार्टफोन तात्न सक्दछ ।
फोन तात्ने कारण र त्यसको उपचारका ५ टिप्स यस्ता छन्ः
१. आरामको आवश्यकता: स्मार्टफोन तातो हुनुका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण चाहीँ स्मार्टफोन धेरै प्रयोग गर्नु पनि हो । फोनलाई विभिन्न बाहिरी डिभाइसहरु जस्तै स्पिकर, वाइफाइ सिग्नल, बलुटुथ आदिसँग कनेक्ट गर्दा पनि फोनको कार्यमा बढोत्तरी हुनजाने र तात्ने हुन्छ । लामो समय फोनमा गेम खेल्दा वा कुनै एप चलाउँदा पनि फोन तात्दछ । लगातार तस्वीर तथा भिडियो खिच्ने कामले पनि फोन तात्दछ । यस्तोमा तपाइँको स्मार्टफोनलाई आरामको आवश्यकता हुन्छ । तपाइँ लामो समयदेखि फोन चलाइरहनु भएको छ भने केही बेर विश्राम दिनुहोस् । केहीबेर फोनको स्क्रिन अफ गरी राख्नुहोस् । फोन चलाउँदा पनि यसको ब्राइटनेस कम गर्नाले तातोपना केही कम हुन्छ ।
२. धेरै गर्मी वा ठण्डी मौसम: यसका लागि स्मार्टफोन होइन बाहिरी वातावरण जिम्मेवार हुन्छ । स्मार्टफोन स्मार्ट जरुर हुन्छ तर धेरै गर्मी र धेरै चिसो वातावरणका लागि यो बनेको हुँदैन । त्यसैले फोनलाई धेरै चिसो र धेरै तातोबाट बचाउनुहोस् । फोनलाई सिधै घाम पर्नेगरी नराख्नुहोस् । बढि आद्रता भएको ठाउँमा पनि फोन नराख्नुहोस् । फोन बढि नै तातेको छ भने पंखालको नजिक लगेर विस्तारै चिसो पार्नुपर्दछ । तर चिसो बनाइहाल्नका लागि फ्रिजमा राख्नु हुँदैन ।
३. फोनमा भाइरस: फोनमा भाइरस आक्रमण हुँदा वा भाइरसजन्य एप इन्स्टल हुँदा पनि फोन तात्ने समस्या सिर्जना हुनछ । त्यसैले अपरिचित वा शंकास्पद श्रोतका एप डाउनलोड नगर्नुहोस् । फोनको सेटिंग्समा गएर अननोन सोर्सेजबाट आउने खालका एप डाउनलोड हुने अप्सन नै बन्द गर्न सक्नुहुन्छ । यदि फोनमा कुनै भाइरस छिरिसकेको छ भने फोनलाई फम्र्याट गरिहाल्नुस्।
४. फोनको कभर: स्मार्टफोनको सुरक्षाका लागि फोनमा बाहिरी खोल राखिन्छ । तर फोनलाई सुरक्षित राख्न भने अपनाइएको त्यहीँ उपाय कहिलेकाहीँ समस्याको कारक बन्दछ र फोन तात्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले फोन धेरै तातेको बेला त्यसको बाहिरी खोल निकालेर केहीबेर राख्नुहोस् । खोलभित्र राखेर चार्ज गर्ने र धेरैबेर चलाउने नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।
५. ब्याट्रीको निगरानी: लिथियम ब्याट्री निकै कमजोर हुन्छ । ब्याट्रीको समस्यका कारण पनि कहिलेकाहीँ स्मार्टफोन तात्ने कारण बन्दछ । कतिपय घटनामा त ब्याट्रीको समस्याले फोन नै पड्किएको र आगाले लागेको पनि सुनिएको छ । त्यसैले ब्याट्रीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्दछ । ब्याट्रीलाई आवश्यकता भन्दा धेरै चार्ज नगर्नुहोस् । फूल चार्ज भन्दा हरेक पटक ८०–९० प्रतिशत चार्ज गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै सक्कली चार्जरको प्रयोग गर्ने र ब्याट्री बिग्रिएर फेर्नुपर्दा सम्बन्धित ब्राण्डको सक्कली ब्याट्री नै हाल्नुपर्दछ ।
« चितवनको भण्डारामा राप्ती गोल्डकप हुने, विजेता लाई २ लाख नगद पुरुस्कार (Previous News)
(Next News) माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा विपक्षी नेता इब्राहिम विजयी »
फेसबुक म्यासेन्जरमा डार्क मोड सेवा सुरु
डसेपछि मौरी किन मर्छ ?
फेसबुकको नयाँ फिचर : झुक्किएर गएको मेसेज डिलिट गर्न मिल्ने
एप्पलको नयाँ आइप्याड सार्वजनिक,अहिले सम्मकै पातलो
एप्पलले नयाँ आइप्याड र म्याक सार्वजनिक गर्ने
इजरायलमा नेपाली दुतावासले २५६३ औं बुद्ध जयन्ती मनाउने,नेपाली समुदायको संघसंस्थालाई सहभागी हुन आव्हान
प्रधानमन्त्री ओली र इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु बीच टेलिफोन वार्ता
श्रीलंका बम विस्फोटमा परी ५० को मृत्यु ,दुई सयभन्दा बढी मानिसहरु घाइते
भारतीय दूतावासद्वारा तामाङ वस्तिमा रहेको छ्योइफेल गुम्बाको पुनर्निर्माण
ह्योल्मो समाज इजरायलले बार्षिक उत्सव तथा साधारण सभाको साथमा २५६३ औं बुद्ध जयन्ति मनाउने तयारी
तेलअविव - नेपाली दुतावास इजरायलले एशियाका ज्योति तथा नेपालका गौरव गौतम... बाँकी यता